စကားတွေကို လှလှပပ တန်ဆာဆင်ဖို့ အရောင်တွေကို အီဒီယမ်အနေနဲ့ ခပ်လန်းလန်းလေး သုံးကြမယ် -
အမယ်.. ဒီလိုတွေလည်း သုံးလို့ရသားဟ.. <3 <3
အရောင်လေးတွေမှာ သူတို့နာမည်တွေအပြင် အခြားအဓိပ္ပာယ်တွေလည်း ရှိတယ်ဆိုတာ ယောင်းတို့သိကြမှာပေါ့။ ဥပမာ အနီရောင်ဆို သတ္တိ၊ အပြာရောင်ဆို ဆိတ်ငြိမ်ခြင်း၊ အနက်ရောင်ဆို ဝမ်းနည်းခြင်း။ အချို့အရောင်တွေဆို နှစ်မျိုးထက်ပိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေတောင် ရှိသေးတယ်။
နောက်စိတ်ခံစားချက်တွေကို ဖော်ပြရာမှာလည်း အရောင်တွေကို သုံးလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ I am feeling green ဆိုရင် နေလို့မကောင်းဘူး၊ မအီမသာဖြစ်နေတယ်၊ အန်ချင်နေတယ် ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပြီး feeling blue ဆိုရင်တော့ ဝမ်းနည်းတယ်၊ စိတ်မကြည်ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ။
ဒီထက်ပိုပြီးလှတဲ့အသုံးကတော့ အီဒီယမ်အနေနဲ့ သုံးတာမျိုး။ အက်မင် အီဒီယမ်အမျိုးအစားတွေအကြောင်းရေးဖူးပါတယ်။ အီဒီယမ်ဆိုတာသူ့ဟာသူနေရင်တောင် တော်တော်လှတဲ့အသုံးလေ။ အရောင်လေးတွေနဲ့လည်း တွဲလိုက်ရော ပိုပြီးလန်းတဲ့ အသုံးလေးတွေ ဖြစ်သွားရော။ ကဲ ဒါဆို အက်မင်သိသလောက် ခပ်ဆန်းဆန်း Color Idiom လေးတွေအကြောင်း မျှဝေပေးမယ်နော်။
Black mood – စိတ်ရှုပ်နေတယ်၊ ဒေါသထွက်နေတယ်၊ စိတ်ဓာတ်ကျနေတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ။
Eg – Don’t mess up with me. I am in the black mood.
Black out – မေ့လဲသွားတာတို့ မူးလဲသွားတာတို့အတွက် သုံးပါတယ်။
Eg – April blacked out after running for 10 miles.
Black sheep – တစ်မိပေါက် တစ်ယောက်ထွန်းဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပေါ့။ မကောင်းတဲ့သဘော ဆောင်ချင်တဲ့အခါ သုံးတယ်။ အတန်းထဲမှာ အကုန်လုံးက လိမ္မာတယ်။ သူတစ်ယောက်တည်း ပြောမရတာ။ ဒါမျိုးလေး။
Eg – All of his family members are social and polite, but him. He is indeedablack sheep.
Related articles >>> ခန့်မှန်းရခက်သော အီဒီယမ်အသုံးအနှုန်းများ
Blue-eyed boy – ပစားပေးခံရတဲ့သူကို ရည်ညွှန်းချင်တဲ့အခါ ပြောပါတယ်။
Eg – My younger brother is my mom’s blue-eyed boy among our siblings.
Once inablue moon – အရမ်းရှားတယ်။ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲဆိုတဲ့ အခြေအနေမှာ သုံးပါတယ်။
Eg – My aunty comes and visits us once inablue moon.
Out of the blue – မထင်မှတ်ဘဲ ဖြစ်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ဖော်ပြချင်တဲ့အခါ သုံးပါတယ်။
Eg – Yesterday was sunny, so I didn’t take umbrella, but it rained out of the blue.
Green Fingers – ပန်းပျိုးလက်လို့ပဲ ပြောရမယ်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်၊ အပင်စိုက်လို့ ဖြစ်ထွန်းတဲ့သူကိုပြောချင်တာပါ။
Eg – U Ba isagood farmer. He really has green fingers.
Green Light – မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ မီးစိမ်းပြတယ်ပေါ့။ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ခွင့်ပြုချက်ရသွားတာကို ပြောချင်တာပါ။
Eg – “How is your parent’s reaction on our upcoming trip?” “It’s green light.”
Related article >>> အင်္ဂလိပ်စာအသုံး အလန်းများ (Idioms)
Pink elephants – အရက်သောက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးပြီးဖြစ်ဖြစ်၊ ချော်လဲလို့ ခေါင်းမူးသွားတာဖြစ်ဖြစ် ရီဝေဝေဖြစ်နေချိန်မှာ မြင်ရတဲ့ ပုံရိပ်ယောင်တွေကို ခေါ်တာပါ။
Eg – I think I am drunk. I am seeing pink elephants.
In the pink of health – ကျန်းမာရေးအရမ်းကောင်းတယ်လို့ ပြောချင်တာပါ။
Eg – My grandfather is 80 years old but he is still in the pink of health.
In the red – အကြွေးတွေ ဝိုင်းနေတာပါ။ ဒီမှာဆိုရင်တော့ အကြွေးက လည်ပင်းနစ်တယ်ပေါ့။
Eg – This company is not in trusted stage. I heard they are in the red.
See red – ရုတ်တရက်ကြီး ဒေါသထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါ။ ကျွဲတွေ အနီရောင်မြင်ရင် ဝှေ့တဲ့ Concept ကနေ ယူထားတဲ့ အသုံးပေါ့။
Eg – She was just nice and fine at first but she saw red in another minute.
ဒီ ၅ မျိုးကတော့ သိပ်မြင်ဖူးမှာမဟုတ်တဲ့ အသုံးအလန်းလေးတွေ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်။ အခြား Color နဲ့ ပတ်သက်တာလေးတွေ ရှိနေသေးပေမဲ့ အရမ်းရှည်သွားမှာစိုးလို့ ဒီလောက်ပဲနော်။
နောက်မှ ထပ်ပြီးဝေမျှ ပါဦးမယ်။
စာကွောငျးလေးတှေ အရောငျစုံနအေောငျ အရောငျလေးတှကေို အီဒီယမျအနနေဲ့ ခပျလနျးလနျးသုံးကွမယျ။
အရောငျလေးတှမှော သူတို့နာမညျတှအေပွငျ အခွားအဓိပ်ပာယျတှလေညျး ရှိတယျဆိုတာ ယောငျးတို့သိကွမှာပေါ့။ ဥပမာ အနီရောငျဆို သတ်တိ၊ အပွာရောငျဆို ဆိတျငွိမျခွငျး၊ အနကျရောငျဆို ဝမျးနညျးခွငျး။ အခြို့အရောငျတှဆေို နှဈမြိုးထကျပိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျတှတေောငျ ရှိသေးတယျ။
နောကျစိတျခံစားခကျြတှကေို ဖျောပွရာမှာလညျး အရောငျတှကေို သုံးလို့ရပါတယျ။ ဥပမာ I am feeling green ဆိုရငျ နလေို့မကောငျးဘူး၊ မအီမသာဖွဈနတေယျ၊ အနျခငျြနတေယျ ဆိုတဲ့အဓိပ်ပာယျရပွီး feeling blue ဆိုရငျတော့ ဝမျးနညျးတယျ၊ စိတျမကွညျဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျပါ။
ဒီထကျပိုပွီးလှတဲ့အသုံးကတော့ အီဒီယမျအနနေဲ့ သုံးတာမြိုး။ အကျမငျ အီဒီယမျအမြိုးအစားတှအေကွောငျးရေးဖူးပါတယျ။ အီဒီယမျဆိုတာသူ့ဟာသူနရေငျတောငျ တျောတျောလှတဲ့အသုံးလေ။ အရောငျလေးတှနေဲ့လညျး တှဲလိုကျရော ပိုပွီးလနျးတဲ့ အသုံးလေးတှေ ဖွဈသှားရော။ ကဲ ဒါဆို အကျမငျသိသလောကျ ခပျဆနျးဆနျး Color Idiom လေးတှအေကွောငျး မြှဝပေေးမယျနျော။
Black mood – စိတျရှုပျနတေယျ၊ ဒေါသထှကျနတေယျ၊ စိတျဓာတျကနြတေယျဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျပါ။
Black out – မလေဲ့သှားတာတို့ မူးလဲသှားတာတို့အတှကျ သုံးပါတယျ။
Black sheep – တဈမိပေါကျ တဈယောကျထှနျးဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျပေါ့။ မကောငျးတဲ့သဘော ဆောငျခငျြတဲ့အခါ သုံးတယျ။ အတနျးထဲမှာ အကုနျလုံးက လိမ်မာတယျ။ သူတဈယောကျတညျး ပွောမရတာ။ ဒါမြိုးလေး။
Related articles >>> ခနျ့မှနျးရခကျသော အီဒီယမျအသုံးအနှုနျးမြား
Blue-eyed boy – ပစားပေးခံရတဲ့သူကို ရညျညှနျးခငျြတဲ့အခါ ပွောပါတယျ။
Once inablue moon – အရမျးရှားတယျ။ ဖွဈတောငျ့ဖွဈခဲဆိုတဲ့ အခွအေနမှော သုံးပါတယျ။
Out of the blue – မထငျမှတျဘဲ ဖွဈသှားတဲ့ အဖွဈအပကျြတှကေို ဖျောပွခငျြတဲ့အခါ သုံးပါတယျ။
Green Fingers – ပနျးပြိုးလကျလို့ပဲ ပွောရမယျ။ စိုကျပြိုးရေးလုပျ၊ အပငျစိုကျလို့ ဖွဈထှနျးတဲ့သူကိုပွောခငျြတာပါ။
Green Light – မွနျမာလိုဆိုရငျတော့ မီးစိမျးပွတယျပေါ့။ တဈခုခုလုပျဖို့ ခှငျ့ပွုခကျြရသှားတာကို ပွောခငျြတာပါ။
Related article >>> အင်ျဂလိပျစာအသုံး အလနျးမြား (Idioms)
Pink elephants – အရကျသောကျပွီးဖွဈဖွဈ၊ မူးယဈဆေးဝါးသုံးပွီးဖွဈဖွဈ၊ ခြျောလဲလို့ ခေါငျးမူးသှားတာဖွဈဖွဈ ရီဝဝေဖွေဈနခြေိနျမှာ မွငျရတဲ့ ပုံရိပျယောငျတှကေို ချေါတာပါ။
In the pink of health – ကနျြးမာရေးအရမျးကောငျးတယျလို့ ပွောခငျြတာပါ။
In the red – အကွှေးတှေ ဝိုငျးနတောပါ။ ဒီမှာဆိုရငျတော့ အကွှေးက လညျပငျးနဈတယျပေါ့။
See red – ရုတျတရကျကွီး ဒေါသထှကျလာတယျဆိုတဲ့အဓိပ်ပါယျပါ။ ကြှဲတှေ အနီရောငျမွငျရငျ ဝှတေဲ့ Concept ကနေ ယူထားတဲ့ အသုံးပေါ့။
ဒီ ၅ မြိုးကတော့ သိပျမွငျဖူးမှာမဟုတျတဲ့ အသုံးအလနျးလေးတှေ ဖွဈမယျထငျတယျနျော။ အခွား Color နဲ့ ပတျသကျတာလေးတှေ ရှိနသေေးပမေဲ့ အရမျးရှညျသှားမှာစိုးလို့ ဒီလောကျပဲနျော။
နောကျမှ ထပျပွီးဝမြှေ ပါဦးမယျ။
Tagged English, Idioms, Knowledge, language
ကိုယ့်​ဘက်​က လုံးဝပြန်​မကြိုက်​နိုင်​တဲ့သူက ကိုယ့်ကိုကြိုက်​​နေရင်​ ဒီနည်း​လေး​တွေနဲ့ ငြင်းကြမယ်​။
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ရိုက်ချက်များနှင့် အဆင့်မြင့်ဆန်းသစ်ထားသော AI နည်းပညာ စွမ်းဆောင်ရည် အတွေ့အကြုံများကို ဖန်တီးပေးနိုင်မည့် V9 ကို Vivo မှ စတင်မိတ်ဆက်
Posted on May 7, 2018 July 25, 2018 Author Nilar
ဆယ်လ်ဖီကြိုက်တဲ့ ယောင်းတို့အတွက် အဆင်ပြေဆုံးပဲ
Biographies Biography Knowledge Women News
ကက်သရင်း ဂရေဟမ် သို့မဟုတ် လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး အာဂအမျိုးသမီးတစ်ဦး
Posted on October 3, 2018 Author Aye Mon Kyaw
အမျိုးသားတွေ ကြီးစိုးတဲ့ ခေတ်ဖြစ်လေတော့ ကက်သရင်းရဲ့ အဖေဟာ သူပိုင်တဲ့ သတင်းစာတိုက်ကို သူ့သမီးအရင်းကို မပေးခဲ့ဘဲ သမက်ဖြစ်သူ ဖိလစ်ဂရေဟမ်ကိုသာ လွှဲအပ်ခဲ့ပါတယ်။